Modafinil: ဘယ်မှာအရည်အသွေးမြင့် Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ | AASraw အမှုန့်
/ဘ‌‌လော့ခ်/modafinil/Modafinil: အရည်အသွေးမြင့် Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိ
အပေါ် Posted 10 / 29 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil. ဒါဟာရှိပါတယ်7မှတ်ချက်.
Modafinil: ဘယ်မှာအရည်အသွေးမြင့် Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ
Modafinil ရွှင်လန်းတိုးပွါးခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းကာကွယ် narcoleptics များအတွက်ဆေးညွှန်းဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုနည်းတူသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးပွားစေဖို့ဖြစ်ပျက်နှင့် nootropics ၏အမျိုးအစားအတွက်အစွမ်းထက်နှင့်အလွန်အမင်းမှတ်ဖြည့်စွက်သည်။
ဘယ်လို modafinil အကျင့်ကိုကျင့်အတွက် Enhancering သင့်ဦးနှောက်နဲ့ခံစားချက်?
အချို့သောမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများမတူဘဲ, back up လုပ်ထားဖို့သက်သေအထောက်အထားကောင်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုရှိမယ့် Modafinil ၏ဆိုးကျိုးများ.
ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်, modafinil "ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အဆင့်ဆင့်, လှုံ့ဆျောမှု, တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်သတိဝီရိယ။ " တိုးတက်ကောင်းမွန်
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကထုတ်ဝေတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခု Modafinil "ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မှု", ဆိုလိုသည်မှာ, မကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလျှော့ချမှာထိရောက်သောဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Modafinil ပင်အိပ်ပျော်ခြင်းဆုံးရှုံးဆရာဝန်တွေအတွက်ဦးနှောက် function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
တချို့သက်သေအထောက်အထား Modafinil သာနိမ့်အိုင်ကျူနှင့်အတူလူကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ကြောင့်လမ်းမခံစားရပါဘူးရှိပါသည်။
ဒီကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီး Modafinil အကောင်းဆုံးခေါ်ဆောင်သွား?
သင့်ဆရာဝန်များကအမိန့်အဖြစ် modafinil ကိုသုံးပါ။ သငျသညျအားပေးပြီးမှအချက်အလက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။ အနီးကပ်အားလုံးညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။
အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာ Shift: အလုပ်မစတင်မှီ 1 နာရီကိုယူပါ။
Narcolepsy နှင့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်: အနံနက်၌ဤဆေးပညာကိုယူပါ။
ဒါကြောင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်ရောက်လုနီးပြီလျှင်, လွဲချော်ထိုး skip နှင့်သင့်သာမန်အချိန်ပြန်သွားပါ။
တစ်ချိန်တည်းသို့မဟုတ်အပိုဆေးများမှာ2ဆေးများယူမထားပါနဲ့။
ဘယ်မှာ to buy အရည်အသွေးမြင့်မားသော Modafinil?
ဘယ်လိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အားလုံးကိုသတိရပါ အွန်လိုင်း modafinil အိန္ဒိယကနေရင်းမြစ်ထားတဲ့ပါသလဲ?
ဒါကအများဆုံး modafinil e-commerce site များကကမ်းလှမ်းထုတ်ကုန်ချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ လူအားလုံးတို့သည်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များတူညီတဲ့ထုတ်ကုန် dropshipping ကြသည်!
သင်တစ်ဦးရောင်းချသူအကဲဖြတ်နေသည့်အခါ (သူတို့ရောင်းထုတ်ကုန်တူညီကြောင့်) ဒါ, သငျသညျထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သျောလညျးကိုသင်ရောင်းချသူယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်းကိုသေချာစေချင်ကြဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏အမိန့်အကောက်ခွန်များကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေသည်လျှင်, ရောင်းချသူဖောက်သည်ထောက်ခံမှုကနေတစ်ဆင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုခုမသွားပါဘူးဆိုရင်သူတို့တစ်တွေအခမဲ့အစားထိုးကမ်းလှမ်းရန်ပါသလား
အခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ် ယုံကြည်စိတ်ချရသော modafinil ရောင်းချသူ အခင်းဖြစ်ပွားရာပေါ်မှာ right now.It တရုတ်ထံမှ AASRAW ဖြစ်ပါတယ်။
AASRAW အားဖြင့် Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဈေးကွက်အပေါ်အများဆုံးရှာကြပြီးနောက်အများစုတတ်နိုင်နှင့်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးအ modafinil ဖြစ်ပါတယ်။ AASRAW အသုံးပြုသူများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယင်း၏ potency.modafinil အကြောင်းကို raving နှင့်အတူအွန်လိုင်းလက်ရှိအရောင်းရဆုံး modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်တစ် Eugeroic သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက်အေးဂျင့်မြှင့်တင်မယ့်နိုးနိုးကွားကွားဖြစ်ပါတယ်။ modafinil ၏သက်ရောက်မှုယခု aasraw အမှုန့်ကိုဝယ်, သင့်အိတ်ကပ်ထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုမီးရှို့ခြင်းမရှိဘဲနိုးနိုးကွားကွား, သိမြင်မှုတိုးမြှင့်, ခံစားချက်တိုးမြှင့်, ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်အပျော့စား euphoria.If သငျသညျအသှေးကိုလိုခငျြလညျးပါဝငျ!
7073 Views စာ
Kimberly Horrocks09 မှာ 15 / 2018 / 7: 52 ညနေ
ငါ Modafinil (Nootropics) အမှုန့်များ၏ 10grams ဝယ်ချင်ပါတယ်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က06 မှာ 12 / 2018 / 3: 18 နံနက်
OK ကို, သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် http://www.aasraw.com/contact/ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်။
Cerah06 မှာ 11 / 2018 / 3: 24 ညနေ
အဘယ်သို့ငါသင်သည်ထိုကဲ့သို့သော sibutramine နှင့် modafinil အဖြစ်ကဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောဆေးဝါးများကိုဝယ်နိုင်သလဲ ဒါ့အပြင်သူတို့ကအတူတကွယူလိမ့် csn?
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က04 မှာ 26 / 2018 / 8: 36 ညနေ
High Quality: ငါတို့သည် 98% ထက်မနည်း, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ goodsare အပေါငျးတို့သတိထားတော်ကဲ့သို့ပင်။
Tyyler Orrrick04 မှာ 26 / 2018 / 6: 53 နံနက်
ငါအမှုန့်ပုံစံ LGD-4033, YK-11, Modafinil, GW-501506, MK-2866 နှင့် MK-677 အပေါ်စျေးနှုန်းအရချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က03 မှာ 09 / 2018 / 8: 42 ညနေ
0k, ကျနော်တို့ 8 နာရီအတွင်းသင်ပြန်မခေါ်ပါလိမ့်မယ်
ကယ်လီအန်ဒါဆင်03 မှာ 09 / 2018 / 7: 13 နံနက်
ငါ modafinil အမှုန့် source ရန်လိုအပ်ပါတယ်
အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် stanozolol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?	Modafinil: ငါဘယ်လို Modafinil အမှုန့်ကိုယူသင့်သနည်း